Baolina kitra : Malagasy mirahalahy hijery ny amboara eran-tany any Rossia
13/06/2018 admintriatra 0
Na mbola tsy tafakatra tamin’ny dingana famaranana aza, dia tsy diso anjara ny Malagasy. Ankoatra ny fetim-pirenena, dia hetsika goavana iray hifantohan’ny sain’ny maro ihany koa ao anatin’ity volana jona ity ny fiadiana ny amboara …Tohiny
Voasakan’ny Pesta : Hotanterahina ny 15 jolay izao ny sehon’i Lalatiana
Tokony notanterahina ny 8 oktobra 2017. Tsy tontosa noho ny fisian’ny aretina pesta teto amintsika ny fampisehoana saika niarahana tamin’i Lalatiana. Volana maromaro aty aoriana, matotra indray ny fifandraisana eo amin’ny m’Ritsoka Production sy ity …Tohiny
Holafitry ny mpanao gazety : Manameloka ny fanendrena an’i Rina Andriamandavy
Fanaovana tsinontsinona ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara ny fanendrena an’i Rina Andriamandavy minisitra vaovao hisahana ny minisiteran’ny Serasera. Sady tsy mpanao gazety izy no tsy mahalala na kely akory aza ny momba izany asa masina …Tohiny
hetsika eny amin’ny 13 mai : Hotohizan’ireo sendika
“Tsy azo ekena io governemanta vao nitsangana io” hoy i Rado Rabarilala raha nandray fitenenana teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai omaly. Tsy araka izay nifanarahana teny an-kianja mantsy ny firafitr’ity governamanta Ntsay Christian ity raha …Tohiny
international flights dans Kaomina Renivohitra Antananarivo-MIEZAKA MANAKANA NY TETIKASAN’NY FILOHA
escort bursa dans At solmen va esser necessi far uniform lingues
Praiminisitra Mahafaly Olivier : « Vonona hiara-hiasa amin’ny famongorana ny pesta ny governemanta »
“Samia mandray ny andraikitra tandrify azy”. Io no nambaran’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta, Solonandrasana Mahafaly Olivier, nandritra ny fidinany ifotony nijery ny fanadiovana ny tanàna teny amin’ny faritra Antohomadinika omaly. Tamin’izany ihany koa no nanambaran’ny praiminisitra ...Tohiny
Hery Rajaonarimampianina : « Tsy maintsy tanterahina amin’ny taona ho avy ny fifidianana »
Filoha Hery Rajaonarimampianina mivady : Noraisin’ny filoha sinoa Xi Jinping tamin’ny fomba manetriketrika
Vondrona iraisam-pirenena – lalàm-panorenana : Miray tendro amin’ny fiarahamonim-pirenena hamotika ny firenena
Fanakorontanana ataon’ny TIM : Ho samborina i Ravalomanana
music award: Hello there, I found your blog by way of Google at the same time as looking for a related matter,…